TPS Nicaragua | သင့်ရဲ့ TPS ကုန်ဆုံးလျှင်သင်သည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်? | USAHello
TPS နီကာရာဂွာ - သင့် TPS ကုန်ဆုံးလျှင်သင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်?
ဓာတ်ပုံ: US Dept of State
Update ကိုနိုဝင်ဘာလ 4, 2019: TPS for Nicaragua has been extended.
The US government publishedanotice in the Federal Register. The notice says that TPS for El Salvador, ဟေတီ, နီကာရာဂွာ, ဆူဒန်, Honduras and Nepal is extended until TPS court cases have been settled. If you have TPS for Nicaragua, your TPS documents are automatically extended to January 4, 2021.
The notice says that the extension is automatic. ယင်းအပေါ်ထပ်မံမွမ်းမံမှုများအဘို့အကွညျ့ရှု USCIS Nicaragua information page.
အဆိုပါခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်များ၏ 262,500 ဆာလ်ဗေးဒိုး TPS အကျိုးခံစားခွင့်, ထက်ပိုပြီး 42,700 အေပျအမြဲတမ်းနေထိုင်သူ status ကိုခွင့်ပြုခဲ့ပြီ, USCIS အညီ.
TPS ကိုင်ဆောင်သူခိုလှုံခွင့်အဆင့်အတန်းများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, သူတို့ကဒီမှာတစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းခဲ့ကြပါပြီအထူးသဖြင့်လျှင်. သငျသညျထက်နည်းတစ်နှစ်ဒီမှာဖြစ်ရပြီဆိုပါက, သင် ... သင့်တယ် NOW ကကျင့်သုံးပါ. သို့သော်, သင် USCIS မကြာသေးမီကခိုလှုံခွင့် applications များလုပ်ငန်းများ၌ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားပြီကိုသိသောအလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ယခု, သူတို့ပထမဦးဆုံးလတ်တလော applications များပြန်လည်သုံးသပ်နေကြသည်. သငျသညျခိုလှုံခွင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်းပြီးတာနဲ့, သင့်ရဲ့အမှုကိုကြားမီကအလွန်တိုတောင်းသောအချိန်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ဒါကြောင့်, you must only apply for asylum if you do qualify because otherwise you risk having your case heard and then being deported. သင့်အနေဖြင့်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ် ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားဖို့ပုံစံ (ဒီဥပဒေရေးရာပုံစံဖြစ်ပြီးသင်ပုံစံဖြည့်စွက်ကူညီပေးဖို့ရှေ့နေခဲ့လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်).
သင့်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး Options ကိုနှင့်အန္တရာယ်များကိုသိ
စပိန်အတွက် Clinic မှဤလက်ကမ်းကြော်ငြာသင်လျှင်သင်ဖမ်းဆီးသင့်ရဲ့အန္တရာယ်နားလည်ကူညီရန်သို့မဟုတ်အထောက်အထားမဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်.
သင့်ရဲ့သံရုံး TPS အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်သစ်များ post စေခြင်းငှါ. You can find ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့နိုင်ငံ၏အမေရိကန်သံရုံးက်ဘ်ဆိုက်.
သံရုံး၏လိပ်စာဖြစ်ပါသည် 1627 New Hampshire Ave NW
ဝါရှင်တန်, DC က 20009.
ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်:(202) 939 6570.
The Embassy of Nicaragua also has consulates in other cities. သင်လုပ်နိုင်သည် find the consulates on this pagအီး.